Sidaas, waxaan helay oo aan telefoonka sync'd in aan Facebook, Gmail, iyo xisaabaha Yahoo .. Marka sync'd u guratay sano xiriirada .. Like, WAAAYYY aad u tiro badan .. Inta badan taas .. Ma tahay tus ka jiraan wax si oo taas loo sameeyo si fudud, sida in MA on my telefoonka? Sida sort qaar ka mid ah Tababaraha xiriir Android? Waxa kaliya xanuun weyn ee dameerka loo sameeyo telefoonka .. Lol .. Waxaa jira oo kale, boqolaal xiriirada .. Ha-ha .. talo kasta?
Si aad u qabtaan xiriirrada nuqul oo sii xiriir si, waxaad heli kartaa aan halkan talo: Wondershare MobileGo for Android (dadka isticmaala Windows). Tani qabanqaabiyaha xiriir Android ku siinaysaa fursad in uu abaabulo xiriirada ka PC ku haboon aad. Sidaa daraadeed, aad dajiyaan karaa xiriir ka PC ah, Outlook, Windows Cinwaanka Kitaabka iyo Windows Live Mail in qalab Android aad, iyo qeybsanaan. Waxaad ku milmaan karo ama tirtirto xiriirada nuqul in Dufcaddii, soocaan xiriirada by Magaca awoowe ama magaca hore, in koox kasta gelin xiriiro.
Haddii aad tahay qof user Mac ah, waxaad isku dayi kartaa Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) . Iyada oo hawlaha ka yar version Windows ah, waxa aad ku xoojiya sidii ay dajiyaan, dhoofinta iyo tirtirto xiriirada ku saabsan qalabka Android.
Download xiriir Android qabanqaabiyaha this inay la kulmaan astaamaha ay socodyada.
Download version saxda ah ee qalab this. Halkan, waxaan diiradda saaraan version Windows - Wondershare MobileGo u Andoroid. Hadda, aan ka eeg tallaabooyinka on abaabulka xiriirada on Android wada. Ku rakib iyo abuurtaan qabanqaabiyaha xiriir this u Android aad kombuutarka. Markaas, aad arki doonaa suuqa kala sidaan oo kale ah.
Fiiro gaar ah: Halkan, waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Wondershare MobileGo for Android , sida qalabka Android ay taageerayaan, oo ay taageerayaan Android OS iyo OS PC.
Connect aad Android inay PC la WiFi ama cable USB
Si xiro qalabka Android si aad u PC ah, waxaad isticmaali kartaa WiFi (isticmaalo in version Windows) ama cable USB ah. Markaas, qalab Android aad ka dhex muuqan doonaa suuqa kala ugu weyn.
Abaabulaan xiriirada Android: Ku dar iyo xiriirada edit
In aad Android geed buugga qalab, guji "contacts". Dhammaan xiriirada muujiyaan ilaa suuqa kala xiriir ah. Guji "New" in lagu daro xidhiidh cusub. Daaqadda pop-up ka, waxaad ku dari kartaa magaca hore iyo intii dambeba, lambarka telefoonka, cinwaanka email, cinwaanka guriga, dhigay taariikh gaar ah, sida dhalashada, iyo in ka badan. Haddii aad rabto in aad wax ka bedel xiriir ah oo ku saabsan qalab Android aad, double-riix xiriir ah oo ka bedel.
Abaabulaan xiriirada on Android: Import iyo dhoofinta xiriirada
Si aad u dajiyaan xiriirada in qalab Android aad, waxaad riixi kartaa "Import / Dhoofinta". Laga soo bilaabo menu hoos-hoos, doortaan "contacts Import ka computer". Ka dib markii liiska la jiido hoos kale u muuqataa on xaq, waxaad dooran kartaa in dajiyaan xiriirada ka file vCard, Outlook, Windows Cinwaanka Kitaabka iyo Windows Live Mail.
Si aad u dhoofiyaan xiriirada, waa in aad sax xiriirada in aad rabto in aad u dhoofiyaan. Guji "Import / Dhoofinta"> "Dhoofinta xiriir la doortay si ay u computer" ama "dhoofiyo oo dhan xiriirada in computer". Markaas, xiriirada dhoofinta in Windows Live Mail, Muuqaalka iyo Windows Cinwaanka Book.
Abaabulaan xiriirada Android: midowdo xiriirada nuqul
Waa daalin in dadka ay xiriirka la nuqul ku saabsan qalab Android macaamilo. Hadda, wax noqon fudud. Guji "De-nuqul", iyo qalab lagu ogaan doonaa oo waxaan ku tusi xiriirada nuqul. Dooro nooca kulan oo guji "midowdo".
Abaabulaan xiriirada ka Android: Delete xiriirada in Dufcaddii
Fudud oo degdeg badan, aad awoodaan in ay tirtirto tan oo xidhiidho waqti. Dooro xiriirada aad ku socoto in ay tirtirto. Guji "Delete".
Download MobileGo for Android in uu abaabulo xiriirada qalabka Android aad!
> Resource > Android > Sida loo abaabulo Xiriirada Android ka PC